हिन्दी ‘डब फिल्म’को प्रदर्शन रोक्ने बोर्डको निर्णयमा फिल्मकर्मीको असन्तुष्टि- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
हिन्दी ‘डब फिल्म’को प्रदर्शन रोक्ने बोर्डको निर्णयमा फिल्मकर्मीको असन्तुष्टि
वैशाख ८, २०७९ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — मंगलबार चलचित्र विकास बोर्डले हिन्दी डब फिल्मको प्रदर्शन रोक्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्रचार गर्‍यो । नेपाली फिल्म हिन्दी डब फिल्मको चपेटामा पर्‍यो भन्ने फिल्मकर्मीले गुनासो पोख्न थालेपछि बोर्ड अध्यक्ष दयाराम दाहालले हिन्दी डब फिल्मको प्रदर्शन नै रोक्नका लागि मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका हुन् । नेपाली फिल्मकर्मीकै पक्षमा देखिए पनि यो निर्णयले के नेपाली फिल्मको सोमा 'आरआरआर'मा झैं दर्शक ओइर्‍याउला त ? हिन्दी डबको मारमा परेकाहरूले के विदेशी फिल्मकै जस्तो स्तरमा नेपाली फिल्म बनाउलान् ?
'अब नेपाली फिल्मकर्मीले पनि राम्रो फिल्म बनाउनुपर्‍यो । अरुको फिल्म रोकेर नेपाली फिल्म चल्ने भन्ने त होइन । विदेशी फिल्महरू उनीहरूका आफ्नो धर्म, संस्कृतिसँग जोडिएका हुन्छन् । हामीले पनि मौलिक बनाउनुपर्‍यो,' बोर्ड सदस्य एवं कलाकार राज कटुवाल भन्छन्, 'नेपाली फिल्मलाई हतोत्साहित नै बनाउने किसिमले हिन्दी डब फिल्म आउन थालेपछि बोर्डले यस्तो निर्णय लिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका फिल्महरू रोक्न त पाइँदैन । तर‚ विभिन्न भाषाका फिल्महरू चाहिँ डबिङ गरेर ल्याउन पाइँदैन भनेर यस्तो निर्णय लिइएको हो ।'
अहिले हलमा हिन्दी डब फिल्म 'केजीएफ'सँगै नेपाली फिल्म 'ए मेरो हजुर ४' प्रदर्शनकै क्रममा छ । फिल्मको ओपनिङ सो हेर्ने हो भने केजीएफको दाँजोमा नेपाली फिल्मले न्यून सो पाएको थियो । यसअघि 'पुष्पा'सँगै प्रदर्शनमा भिड्नुपर्दा निर्माता अर्जुन कुमारको फिल्म पछाडि धकेलिएको थियो । हिन्दी डब भनिएका दक्षिण भारतका यस्तै फिल्मले कोभिडपछि हलमा दर्शक फर्काउँदैछन् । यस्तो फिल्मलाई रोक्नु नै बोर्डको अव्यावहारिक कदम रहेको हिन्दी फिल्मका वितरक मनोज राठी बताउँछन् ।
'हामीले फिल्म ल्याउँदा हिन्दी भाषाको भनेर सम्झौतामा आउँछ । उहाँहरू कसरी हिन्दी डब भन्दै हुनुहुन्छ । हामीले फिल्म लिँदा हिन्दी वितरकसँग लिन्छौं । मनोरञ्जनको त सीमा हुँदैन । दर्शकलाई जुन फिल्म हेर्न मन लाग्यो‚ पैसा तिरेर हेर्न सक्ने बेला हो यो । जबरजस्ती यही फिल्म हेर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन नि, अहिले त दर्शकसँग थुप्रै विकल्प छन् । बोर्डको यो कदम एकदमै अव्यावहारिक लाग्यो,' राठीले भने, 'सक्छौ भने विदेशी फिल्मको प्रतिरोध नै गर्नुपर्‍यो । नेपाली फिल्मले मात्रै नेपालको मल्टिप्लेक्सको मार्क्स धान्नै सक्दैन । नेपालमा जति नै फिल्म बने पनि २/४ वटा फिल्म चल्ने हो । दर्शकको रुची एकातिर हुन्छ‚ फिल्म अर्को बनिरहेको हुन्छ । अनि अरुको फिल्मले गर्दा आफ्नो फिल्म चलेन भनेर आरिस गरेर हुँदैन नि । केजीएफलाई मात्रै सो दिइएको छैन नि । अहिले ‘ए मेरो हजुर ४’ लाई पनि त सो दिइएको छ ।'
बोर्डको यस्तो निर्णय नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्रको हितमा नरहेको राठीको भनाइ छ । 'हामीकहाँ बनेको लिम्बु भाषाको फिल्मलाई हामीले नेपाली मान्ने कि नमान्ने ? यसरी बोर्डमा ४ जनाले गरेको निर्णय सञ्चार मन्त्रालयमा पुगेको छ भने त्यो गलत नै भयो । यसले नेपाली फिल्मको बजारमा राम्रो असर गर्दैन,' उनले तर्क गरे, 'नेपाली फिल्ममात्र चलेर कहाँ फिल्म हल चल्ने हो र ! सबै किसिमका फिल्म चल्नुपर्छ । हिन्दीमात्रै होइन, भोलि कोरियाली भाषाको फिल्म आयो भने पनि चल्नुपर्छ । अहिले केही सीमित निर्माताको सोच हिन्दी फिल्म भएन भने नेपाली फिल्म भयंकर चल्छ भन्ने छ ।'
निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल पनि बोर्डको निर्णयप्रति सकारात्मक छैनन् । 'विदेशी फिल्मलाई रोकेर नेपाली फिल्म अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो राय होइन । कुनै विदेशी फिल्मसँग भिड्न हामीलाई समस्या होइन । कुनै ठूलो फिल्मसँग जुधाउँदा हामीले पाउने सो, उपस्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने चिन्ता हो नि । नेपालमा पनि विदेशी फिल्मसँग जुध्न सक्ने ल्याकत भएका फिल्महरू बन्छन् । तर‚ ‍त्यही फिल्म कुनै ठूलो फिल्मसँग आउँदा हामीले कस्तो प्लेटफर्म पाउँछौं त भन्ने शंका हो । त्यसैले त्यो कुरालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो,' उनले भने, 'अहिलेको सबैमा कुनै कुरामा रोक लगाएर यही हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा त राम्रो होइन नि । बन्देज होइन‚ व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने नै हो । फिल्मको योग्यताअनुसार सोको बाँडफाँट गर्नुपर्छ । अब नचल्ने फिल्मलाई १५ सो दिनुपर्छ भनेको होइन । तर फिल्म हलले पनि फिल्मको योग्यता बुझेर सो दिनुपर्‍यो नि । जस्तै: ए मेरो हजुर ३ ले पहिला जस्तो सो पायो‚ यसपटक त्यस्तो पाएन नि त । जस्तै: शुक्रबार र शनिबार त राम्रो सो पाउनुपर्‍यो । दर्शक आइदिएनन् भने हटाइदिए भइहाल्यो नि ।'
निर्माता एवं निर्देशक अशोक शर्मा पनि नेपाली फिल्मको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् । 'नेपाली फिल्मलाई प्राथमिकतामा राख्ने छलफल भएको हो । विदेशी फिल्म यहाँ नआओस्, त्यसको प्रदर्शन रोक्नुपर्छ भन्न मिल्दैन । त्यो रोक्नु हुँदैन । कुनै पनि कुरा रोकेर त्यसको समाधान हुँदैन । हामीले हाम्रो उद्योगलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ । बलियो कन्टेन्ट बनाउनुपर्छ । दर्शकले नेपाली फिल्म नहेरेका होइन, हेरिरहेकै छन् । तर‚ हाम्रो कन्टेन्ट पनि बलियो हुनुपर्‍यो । दर्शकले अब जुन पायो त्यही फिल्म हेर्नुहुँदैन । आफ्नो देश भएका हुनाले हामीले हाम्रो फिल्मको सुरक्षा खोजेका मात्र हौं,' उनले भने, 'भारतमै पनि बंगालमा बंगाली, महाराष्ट्रमा महाराष्ट्री, आसाममा आसामी फिल्महरूलाई सरकारले सुरक्षित गरेको छ । तर त्यो सुरक्षाको मतलब अरु फिल्म चलाउन पाउँदैन भन्ने हो ।'
हिन्दी डब फिल्मलाई रोक्न नहुने सल्लाह दिँदै शर्मा थप्छन्, 'प्रेमगीत भन्ने फिल्म हिन्दीमा डब भएको छ । यसरी हामीले हाम्रो फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजाने सोचसहित डब गरिएका फिल्म नेपालमा प्रदर्शन गर्न पाइँदैन भन्न मिल्दैन ।' नेपाली फिल्मको वर्तमान अवस्थाले भने फिल्मकर्मीको जोश हराउँदै गएको दीपेन्द्र सुनाउँछन् । 'फिल्म बाहेक मेरो अन्य पेसा छैन । अहिलेको माहोल हेर्दा डिप्रेस हुने अवस्था छ । हामी फिल्म बनाउँदा जोशमा हुन्छौं । तर‚ प्रदर्शनमा आउँदा डिप्रेस हुने वातावरण आउँछ । यो समयमा पेसा परिवर्तन गर्न पनि भएन । हलमा जाँदा हामीलाई दोस्रो दर्जा जसरी व्यवहार गरिदिन्छ,' उनले भने, 'मैले केजीएफ प्रदर्शनमा आउँदा मेरो फिल्म चिसो मान्छेको १ मिनेटको टिजर हाल्छु भन्दा पनि हलवालाले ठाउँ दिएनन् । मन खल्लो भयो । हामी नेपाली फिल्म गर्छु भन्दा पनि नपाउने । अनि त्यस्तो बेलामा कसलाई गएर दु:ख पोख्ने हुन्छ । त्यसमाथि सोच्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो ।'
बोर्ड सदस्य एवं कलाकार कटुवाल नेपालमा विदेशी फिल्मको प्रदर्शनमा कोटा प्रणाली हुनुपर्ने बताउँछन् । 'अन्तर्राष्ट्रिय फिल्महरू प्रदर्शन हुन पाउने नियम नै छ । तर, अन्य ठाउँहरुमा फिल्म प्रदर्शनमा कोटा प्रणाली लागू छ । महाराष्ट्रको फिल्म दक्षिण भारतमा चल्दैन । त्यता महाराष्ट्रको फिल्म चल्दैन । चाइनामै पनि कोटा प्रणाली छ । हामीकहाँ लापरवाही भयो भन्ने मात्र हो । यहाँ पनि कोटा प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ नि,' उनले भने ।
प्रकाशित : वैशाख ८, २०७९ २०:१९
दक्षिण एसिया बुझाउने आँखीझ्याल
फिल्म साउथ एसियाको १३ औं संस्करण बिहीबारदेखि, ८ देशका ७१ फिल्म देखाइँदै
काठमाडौँ — सर्वाधिक फिल्मको आवेदन ओइरिँदा योपटक आयोजक टिम आश्चर्यमा परेको छ । बिहीबारदेखि सुरु हुने १३ औं फिल्म साउथ एसियामा यो वर्ष अनपेक्षित रूपमा फिल्मको बाढी आएको छ । यसअघिका महोत्सवहरूमा बढीमा १ हजार ४ सय वटासम्मको आवेदन आउँथ्यो । महोत्सवले २५ औं वर्षको उत्सव मनाइरहँदा ३ हजार ५ सय फिल्मको आवेदन पर्‍यो । तिनैमध्येबाट यो वर्षको महोत्सवका लागि ८ देशका उत्कृष्ट ७१ फिल्महरू छनोटमा परेका छन् । चारदिने महोत्सवमा देखाइने डकुमेन्ट्रीमार्फत दर्शकले दक्षिण एसियालाई हेर्ने र बुझ्ने अवसर पाउनेछन् ।
‘काठमाडौंमा बसेर दर्शकले डकुमेन्ट्री फिल्ममार्फत दक्षिण एसियाको अवस्था बुझ्ने मौका पाउनेछन् । डकुमेन्ट्री फिल्म गैरआख्यान हो, यसले त वास्तविक कुरा देखाउँछ नि,’ ब्योजक संस्था अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित भन्छन्, ‘श्रीलंकामा मानिस केले पिरोलिएका छन्, म्यान्मारमा केले उत्साहित बनाउँदै छ, अफगानिस्तानमा के कुराले स्खलन गरेको छ भन्ने कुरा महोत्सवमा हेरियो भने वास्तवमा दक्षिण एसियाको रूप देखिन्छ । फिचर फिल्मले त मनोरञ्जन दिन्छ । एक हदसम्म समाजको चिन्ता पनि देखाउला । तर, डकुमेन्ट्रीले वास्तविकता देखाउँछ ।’
एक गायिकाले आफ्नो समान उपस्थितिका लागि आधुनिक भारतमा गरेको संघर्षको चित्रण गर्ने ‘सटअप सोना’ प्रदर्शन गर्दै यसपटकको महोत्सव सुरु हुने तालिका छ । मिडियामा महिलामाथिका हिंसाको चित्रण कसरी गरिन्छ भन्ने डकुमेन्ट्री फिल्म साउथ एसियाले नै निर्माण गरेको छ । ‘एक बलात्कारपीडित महिलालाई सधैं कहालीलाग्दो हिसाबले हातले मुख छोपेको देखाउँदै चित्रण गरिरहेको हुन्छ । बलात्कारको मुद्दामा त पीडित झनै पीडित बनाइनु हुँदैन नि,’ दीक्षित भन्छन्, ‘त्यसमा कता–कता मिडियाको पनि कमजोरी छ भनेर हामीले फिल्म बनाएका छौं ।’ महोत्सवमा यौनिक तथा अल्पसंख्यकदेखि संस्कृति, राजनीति, बसाइँसराइसम्मका विविध विषयका डकुमेन्ट्री समेटिएका छन् ।
महोत्सवले दक्षिण एसियाभरिका फिल्महरूलाई २५ वर्षदेखि जोड्दै आएको छ । २/२ वर्षको अन्तरालमा आयोजना हुँदै आएको महोत्सवको सन् २०१९ को संस्करण कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएको थियो । यसपटक भने महोत्सवको ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ पनि हुँदै छ । झापाका दर्शकले पनि भर्चुअली काठमाडौंकै दर्शकसँगै एकैपटक डकुमेन्ट्री हेर्न पाउने दीक्षितको भनाइ छ । ‘फिल्म साउथ एसिया आफैंले दक्षिण एसियाभरिका प्रस्तुति नियालेर, केलाएर राम्रा फिल्महरू ल्याउने गरेको छ,’ उनले सुनाए, ‘३ वर्षमा हामीले जति फिल्म बटुलेका छौं, ती संसारभरका राम्रा डकुमेन्ट्री फिल्महरू हुन् । डकुमेन्ट्री फिल्मले गहिराइमा पुगेर विषयलाई पस्किरहेको हुन्छ ।’
कोभिडपछि जनजीवन फेरि सामान्य दैनिकीमा फर्किंदै गरेको अवस्थामा यस्ता महोत्सवहरूले अन्य देशका आगन्तुकलाई भित्र्याउनमा मद्दत पुर्‍याउने दीक्षित बताउँछन् । ‘यहाँ अन्यत्र देशबाट आफैं खर्च गरेर फिल्मकर्मीहरू महोत्सवमा सहभागी हुन आउँछन् । दक्षिण एसियाबाट नेपालमा आउन सजिलै भिसा प्राप्त गर्न सकिन्छ । हामीले त नेपालमा विभिन्न महोत्सवहरू गर्नुपर्छ । सभाहरू गर्नुपर्छ । यसको उदाहरण पनि यो महोत्सव हो,’ उनले भने, ‘यस्ता सभामा अन्य देशका आगन्तुकलाई नेपाल भित्र्याउने नमुना हो हाम्रो महोत्सव ।’
आयोजक संस्था निर्देशक मिनु बर्माले दक्षिण एसियाको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जगत्को चिनारी गराउने आँखीझ्यालका रूपमा यो महोत्सव रहेको बताइन् । कोभिड महामारीपछि ब्युँतेको समाजमा यस पटकको फिल्मी छटामा बढी स्वास्थ्य सरोकारका विषय रहेको उनले खुलाइन् ।
२५ वर्ष सुरु भएको यात्रा
‘हिमाल साउथ एसियन’ म्यागजिनको सम्पादन मण्डलमा थिए दीक्षित र उनको टिम । गम्भीर पत्रकारिता गर्ने भन्ने सोचसहित सुरु भएको थियो म्यागजिन । दौतरी संस्था थियो, डकुमेन्ट्री फिल्म मेकिङ । स्वभावैले डकुमेन्ट्री फिल्मकर्मीसँग आत्मीयता बढ्ने भयो । एक दिन सम्पादन मण्डललाई सुझाव आयो– ‘डकुमेन्ट्री मेकिङसँग नजिक भएकाहरूले त डकुमेन्ट्रीसम्बन्धी फिल्म महोत्सव गरे भइहाल्यो नि ।’ त्यही सुझावले सन् १९९७ मा ‘फिल्म साउथ एसिया’ सुरुवात भयो । ‘काठमाडौं, वास्तवमा दक्षिण एसियाको राजधानी हो । काठमाडौंमा केही कुरा गर्‍यो भने हामी नेपालीलाई त उपहार नै हुन्छ । अन्त जानुपरेन सबै हामीकहाँ आइदिन्छ । यो महोत्सव कलकाताका मानिसले कसरी हेर्ने भनिरहेका हुन्छन् । तर, नेपालीका लागि त हामी सिधै उपलब्ध छौं । यो महोत्सव हामी नेपालीको लागि गरेका हौं । अर्को त दक्षिण एसियाको लागि पनि गरेका हौं,’ दीक्षितले सुरुवाती दिन सम्झँदै भने, ‘हामी छापा माध्यमका पत्रकार मिलेर किन डकुमेन्ट्री फिल्म फेस्टिभल नगर्ने त भन्ने भयो । कुनै पनि कुरा नेपालमा गर्दा अरूलाई पनि उदाहरण मिल्नेछ भन्ने सोचेर महोत्सव सुरु गर्‍यौं ।’
महोत्सव आयोजना गरेसँगै डकुमेन्ट्री फिल्ममेकरहरूले प्लेटफर्म पाए । २५ औं वर्ष मनाइरहँदा यो महोत्सव दक्षिण एसियाकै मुख्य फिल्म फेस्टिभलमा पर्ने गरेको दाबी गर्छन् दीक्षित ।
यसबीच प्रविधिमा धेरै परिवर्तन आयो । महोत्सव सुरु गर्दा सेलुलोइड रिलमा डकुमेन्ट्री खिचिन्थ्यो । अहिले फिल्म देखाउने र बनाउने प्रविधिमै कायापलट भएको छ । प्रविधिले डकुमेन्ट्री फिल्म बनाउन अझ सजिलो गराइदिएको छ । ‘अब त उच्च क्वालिटीमा डकुमेन्ट्री फिल्म बन्नुपर्ने हो नि त । तर, अझै त्यो भइसकेको छैन,’ उनले समीक्षात्मक हुँदै भने, ‘अहिले ह्यान्डीक्याम, मोबाइलको क्यामराले पनि डकुमेन्ट्री फिल्म बनाउन सकिन्छ । तर, जति मात्रामा फिल्महरू बन्नुपर्ने हो बनेका छैनन् ।’
दक्षिण एसिया केन्द्रित वृत्तचित्रको प्रवर्द्धन र संरक्षणमा पुर्‍याएको योगदानलाई महोत्सवको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याउँछन् दीक्षित । ‘मनोरञ्जन (आख्यान फिल्म) को दुनियाँमा केन्द्रित दक्षिण एसियालाई डकुमेन्ट्री फिल्म मेकिङको महत्त्व बुझेर यस्ता फिल्म जोगाइराख्न यो महोत्सवले भूमिका खेलेको छ । नेपालमा बसेर हामीले त्यो काम गर्‍यौं । यो नेपालमै सुरु भएको महोत्सव हो,’ उनले भने, ‘यो महोत्सव काठमाडौंमा बसेर दक्षिण एसियामा भएका डकुमेन्ट्री फिल्ममेकरलाई उत्साह बाँड्ने ठाउँ बनेको छ ।’
प्रकाशित : वैशाख ८, २०७९ ०८:३२
प्रियंका रानी जोशी बनिन् मिस नेपाल
चिसो समाज-चिसो मान्छे
'बीटीएस' को 'ब्रेक'
ब्युँतियो ‘र्‍याप ब्याटल’